Shiinaha Vacuum Pouch Pouch factory iyo shirkado cusub | Boya
Boya waa mid ka mid ah wax soo saarka xirfadeed ee Shiinaha, soo saar bacaha tayo sare leh iyo filimmo loogu talagalay baakadaha cuntada oo si toos ah ula xiriiri kara cuntada qiimaha tartanka.Waxaan sidoo kale nahay shirkad hal abuur leh oo ay ka go'an tahay inay cilmi baaris ku sameyso qalabka baakadaha cusub.
Sida mid ka mid ah habka ugu wax ku oolka badan uguna ganacsiga badan ee loo ilaaliyo cuntada .Bulladaha faaruqinta ah ee lagu sameeyo PA / PE iyo PA / EVOH / PE filimka wadajirka ah, u qaabee nooca boorsada kala duwan adiga oo jecel 3 dhinac oo shaabadaysan, 2 shaabadood oo dhinaca ah ama bacda tubbada ah. Waxa kale oo aad ku dari kartaa jiinyeer iyo daabacaad ilaa 10 midab ah.
Haddii aad raadineyso 2.5mil, 3mil, 4mil, 5mil caqabad caadi ah ama boorso faaruq ah oo saafi ah - marwalba waxaan haysanaa waxaad ubaahantahay!
Hoos waxaa ku yaal faahfaahin qaar ka mid ah boorsadaada faaruqinta ah si aad noo ogaato:
Jeebka Eeg Ballaaran Range Range Length Qaab dhismeedka
Caqabad Dhexdhexaad ah 2.5mil 3mil4mil 5mil 50mm-900mm 100mm-2000mm PA / PE
Caqabad Sare 2.5mil 3mil4mil 5mil 50mm-900mm 100mm-2000mm PA / EVOH / PE
Cadnaan gaar ah 2.5mil 3mil4mil 5mil 50mm-900mm 100mm-2000mm PA / PE
Xaraashka 'vacuum vacuch' ayaa keena kalsoonaan la yaab leh oo leh astaamaha soo socda:
●Cadnaan gaar ah iyo dhalaal sare
●Qiyaasta saxda ah ee dhumucda.
●BPA Free iyo FDA waa la ansixiyay
●Ku habboon cuntada sou vide
●Qaboojiyaha nabdoon, ayaa ka fogaan kara gubashada
Iyada oo leh boorsada faakuumka ee tayada sare leh waxaad ku raaxeysan kartaa cunto cusub wakhti kasta! Macno malahan waxaad jeceshahay inaad xirxirato: hilib, hilib lo'aad, jiis, kalluun cusub ama barafoobay, hilib leh lafo, cuntada badda ama dareere leh ur xoogan ama budo …….
Waxaan had iyo jeer nahay dhinacaaga!
Noqo wax soo saar loogu talagalay baakadaha cuntada, amniga ayaa ah qodobka ugu muhiimsan, marka laga reebo baaritaanka QC-ga ee aan sameyno sidoo kale waxaan leenahay qeybta saddexaad ee nala socota
Maxay muhiim tahay dhammaantood oo leh qiimo jaban, Dhaqaale iyo tayo sare leh!
1.Waa midabbo aad leedahay?
Waxaan haynaa midab cad, cadaan, madow, buluug, casaan, casaan, midab cagaaran ah oo ku saabsan wax soo saar, hadii midabka aad raadineyso uusan ka muuqan liiska fadlan nala soo xiriir bespoke.
Ma waxaad siisaa muunad?
Haa, muunad bilaash ah ayaa laguu siin karaa si aad u tijaabiso tayada.
Waqtigayaga hogaaminta caadiga ah waa 25 maalmood ka dib helitaanka deebaajiga, haddii aad rabto deg deg fadlan la xiriir iibkeena.
Hore: Filimka Thermoforming
Xiga: Fidinta Filimka